ပြန်ပြောင်းအောက်မေ့ ငယ်ငယ်က သီဟိုဋ္ဌ်စေ့ :) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ပြန်ပြောင်းအောက်မေ့ ငယ်ငယ်က သီဟိုဋ္ဌ်စေ့ :)
ပြန်ပြောင်းအောက်မေ့ ငယ်ငယ်က သီဟိုဋ္ဌ်စေ့ :)
Posted by ေရႊမိုးတိမ္ on Apr 30, 2014 in Creative Writing, Short Story | 20 comments
သီဟိုဋ္ဌ်စေ့ ကို တော့ တော်တော်များများ မြင်ဖူး ၊ စားဖူးမယ် ထင်ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် သီဟိုဋ္ဌ်ပင် ၊ သီဟိုဋ္ဌ်သီး ကိုတော့ သိပ်ပြီး သိကြမယ်မထင်ဘူး ။
ငယ်ငယ်တုန်းက မှော်ဘီမှာနေတော့လေ အိမ်ရှေ့မှာ သီဟိုဋ္ဌ်တောကြီးရှိတာ ။
သီဟိုပင်တွေက အမြင့်ကြီး မတ်ပြီးထောင်တက်မသွားကြဘူး ။ များသောအားဖြင့် ဘေးဘက်ကို ဖြာထွက်ပြီး နေတော့ ကလေးအရွယ်ပေမယ့် တက်ရလွယ်တယ် ။ ကိုယ်သီဟိုပင်တွေကိုချစ်တဲ့ ထဲမှာ အဲ့တာလည်းပါတယ်။ သီဟိုဋ္ဌ်သီးပေါ်တဲ့အချိန်ဆို သိပ်ပျော်တာပဲ ။ အပင်ပေါ်တက် သီဟိုဋ္ဌ်သီးတွေခူးပြီး အပင်ပေါ်တင်ထိုင်စား ။
အစေ့ကို သိမ်းထား ပြီး မီးဖုတ်စားရတာ။ မှတ်မှတ်ရရ ဆောင်းတွင်းမှာ သီဟိုဋ္ဌ်သီးတွေ သီးတယ် ။
ဆောင်းတွင်းမနက်ခင်းတွေမှာ သစ်ရွက်ခြောက်မီးဖိုနဲ့မီးလှုံရင်း သီဟိုဋ္ဌ်စေ့တွေကို မီးပုံထဲ ပစ်ပစ်ထည့်ပြီး မီးဖုတ်စားတာပေ့ါ ။ သီဟိုဋ္ဌ်အစေး ပေါက်တာလည်း လက်မှာ ပေပွလို့ ။ ပြီးရင် အုတ်နီခဲတို့ ကျောက်ခဲတို့နဲ့ ထု ထု ပြီး အထဲ ကသီဟိုစေ့ လေးကို စားရတာ ။ ခုလို လွယ်လွယ်ကူကူ ဝယ်စားရတာထက်တောင် ပိုအရသာရှိသလိုပဲ ။
သီဟိုသီးက ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ သရက်သီးရယ် ၊ ပန်းသီးရယ် စပ်ထားသလိုမျိုး ။ အရည်ရွှမ်းတယ် ၊ အမျှင်ပါတယ် ၊ အသားထူထူအိအိလေးတွေလည်းရှိတယ် ။ အိမ်ရှေ့က အပင်တွေက နှစ်မျိုးသီးတယ် အဝါရောင်သီးတဲ့အပင်ရယ် ၊ ပန်းရင့်လို အနီလို အရောင်စပ်သီးတဲ့အပင်ရယ်။ သီဟိုသီးတွေ အပင်ပေါ်မှာ မှည့်ဝင်းနေပြီဆို မခူးဘဲ ၊ မစားဘဲ ဘယ်လိုမှ မနေနိုင်ဘူး … သီဟိုသီး ကို အသီးလည်းစား ၊ အစေ့လည်း မီးဖုတ်စားတဲ့အပြင် နောက်တစ်မျိုး လုပ်တာရှိသေးတယ် သီဟိုဋ္ဌ်ဝိုင်လေ ငယ်ငယ်ဆိုတော့ ဒီလိုပဲ ဆော့တာပေါ့ ။ သီဟို သီးတွေကို ခူး ။ အစေ့တွေကို ချွတ်ပြီးသိမ်းထား (ရောင်းစားရင်လည်း ပိုက်ပိုက်ရတယ်လေ အဲ့အစေ့တွေက ) ပြီးတော့ အသီးကို အရည်ညှစ် ဆားနည်းနည်းထည့်ပြီး အရက်ပုလင်းခွံတွေထဲ အဲ့ သီဟိုသီးရည်တွေ ထည့်ထားတာ ။ ပြီးကျရင် တစ်ဝက်ကို တွင်းတူးပြီး မြေမြှုပ် ၊ တစ်ဝက်ကို ရေထဲစိမ် (ဘယ်ကရတဲ့နည်းစနစ်တွေလည်းမသိပါဘူး ။ ကလေးဘဝဆိုတော့ ဒီတိုင်းဆော့ချင်တာကလည်း များများကိုးးး )
ပြီးတော့ တစ်ပတ်လောက်ရှိရင် အဲ့ဒါတွေကို ပြန်ဖေါ်ရတာကို က စိတ်လှုပ်ရှားစရာ၊ ပျော်စရာကောင်းသေးတာ ။ ပြီးတော့ သီဟိုဋ္ဌ်ဝိုင်ဆိုပြီး သောက်ကြတာပေ့ါ ။ :3
သိမ်းထားတဲ့သီဟိုုဋ္ဌ်စေ့တွေကို မှော်ဘီဈေးမှာသွားရောင်းရင် ပိုက်ပိုက်ရရော ။ အဲ့ ပိုက်ပိုက်နဲ့ မေမေ က အကျင်္ီအသစ်တို့ ဘာတို့ ဝယ်ပေးရင်သီဟိုဋ္ဌ် အကျင်္ီတို့ ဘာတို့ နာမည်ပေးလိုက်သေးတာ။
ပြီးတော့ သီဟိုဋ္ဌ်ရွက်နုနုကလည်း အရမ်းစားကောင်းတာ ။ ချဉ်ပေါင်ဟင်းလေးရယ် ၊ ငါးမွှေ သို့မဟုတ် ငါးကြော်လေးရယ် ၊ ငါးပိရည်ဖျော်ရယ် သီဟိုဋ္ဌ်ရွက်နု တို့စရာ ၊ ငှက်ဖျောဖူးပြုတ်တို့စရာတွေနဲ့ဆို ထမင်းဘာမြိန်သလည်းမမေးနဲ့ ။
ဟိုရက် က ခရီးထွက်ရင်း မော်လမြိုင်ရောက်တော့ နေ့လည်စာဝင်စားတယ် ။အဲ့ဆိုင်က သီဟိုဋ္ဌ်ပင်တွေ သရက်ပင်တွေနဲ့ အရိပ်ကောင်းကောင်းလေးပေ့ါ။ မော်လမြိုင်သူတွေ ဟင်းချက်လက်ရာကလည်း ကောင်းပါတယ် ။ အဲ့မှာ ငါးပိရည် နဲ့ တို့စရာ သရက်သီး၊ ရုံးပတီသီး တွေလာချပေးတာပေါ့။ ကိုယ်ကတော့ သီဟိုဋ္ဌ်ပင်ပေါ်မျက်လုံးဝဲ ပြီး သီဟိုဋ္ဌ်ရွက်နုနုတွေ လိုက်ရှာနေတာ ။ ဒီရာသီမှာ ရွက်နုသိပ်မရှိဘူး .. လက်လှမ်းမီသလောက်လေးတွေခူးပြီး ရေဆေးပြီး ထမင်းနဲ့ တို့စားကြတယ် ။ ဆိုင်ကလည်း ကိုယ်တို့ခူးနေတာတွေ့တော့ သူတို့လည်းထပ်ခူးပြီး ပန်းကုန်လေးနဲ့သီဟိုရွက်တွေ လာချပေးတယ်
မိသားစုလိုက် ထမင်းစားပွဲမှာ ငါးပိရည် နဲ့ သီဟိုဋ္ဌ်ရွက်နု တို့စရာစားရတာ ကိုယ်ငယ်ငယ်ကအချိန်တွေကို ပြန်ရောက်သွားသလိုခံစားရလို့ … တကယ့်ကို အမှတ်တရပါပဲ ..
(သူငယ်ချင်းတွေ သီဟိုသီးမြင်ဖူးအောင် ဂူဂဲ ကနေရှာထားတာပါ ။ :-) )
အရွက်ရော အသီးရော မြင်ဖူးပြီ
ပြောရင်းနဲ့ သီဟိုဋ္ဌ်စေ့ စားချင်လာပြီ :sar:
သူများက သီဟိုဋ္ဌ်သီးစားချင်ဒါ :-(
ဒီ မှာ ဈေးကြီးတယ်။
ဖေဖေ ထားဝယ်မှာ နေတုန်းကတော့ ခဏခဏ စားရတယ်။
မန်းလေးမှာတော့ အပင်ကိုမတွေ့မိဘူး … အသီးရော အရွက်ရော စားချင်တာအရမ်းပဲ …
ဒါနဲ့ အဲ့လိုပုံလေးဒွေရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲဟင်
အရွက်ကတော့ ..ကြည့်စားဗျို့ … (အစေ့ကတော့ စကော့တလန်စမ်းရေနဲ့ သိပ်လိုက်ထှာရယ်…)
တကယ်တော့ …သီဟိုဠ်ရွက်က အင်မတန် ဗိုက်အောင့်တာကလား …
အဲ့သည်မှာ သီဟိုဠ်စေ့ ကို အောက်ကမီးမျှဉ်းမျှဉ်း နဲ့ …သံပြားပေါ်တင်ပီး ငယ်ငယ်က ကိုယ်တိုင်လှော်ဖူးတာ သွားသတိရတယ်…
အင်မတန် အစေးပေါက်တာ အပူလောင်တာကလား… ဒီလို အစေးများပီး လောင်ကျွမ်းအားကောင်းလို့
စက်သုံးဆီဖော်မြူလာတချို့မှာ ထည့်သွင်းတယ် လို့တော့ ငယ်တုန်းကမှတ်ဖူးတယ်(သေချာမသိ)
အဲ့သလို အပင်ကအရွက်ကို ခူးပြီးတို့မှတော့ …အောင်မငီး ပူထှာ…
သီဟိုရွက်က ချုပ်တတ်တယ် မရိုစီ… မစားနဲ့
သီဟိုအသီး.. အရွက်.. စားလို့ရတယ်လို့.. ခုမှသိကြောင်း…
အစေ့..အဆံ(Nut)တွေထဲ.. သီဟိုစေ့က တော်တော်ဈေးကြီးတဲ့အထဲပါတယ်..။
အဆံတွေထဲ..ဈေးအကြီးဆုံးတခုဖြစ်တဲ့.. Macadamia Nuts ကိုစမ်းစိုက်ကြည့်ကြဖို့ကောင်းတယ်…။
Most Expensive Nut
by jeremyComments (6)
Originally considered ornamental plants, the flowering Macadamia trees have becomeavaluable crop since they were originally described by John Macadam, after whom they were named, around 1857. The reason for their commercial importance is that two of the nine species of Macadamia produce the most expensive nuts in the world.
While the trees originated in Australia, the first Macadamia plantations were located in Hawaii. Today, Hawaii is still one of the largest sources of Macadamia nuts and the US is their largest consumer. Other sources of Macadamia nuts include South Africa, Central America and Australia, the largest source of the expensive nuts.
The Macadamia nut is prized not only for its rich, buttery flavor but also for its oil. The kernel may consist of up to 80% oil. This oil is useful in cosmetics, particularly in skin care products, because it isaviable alternative to mink oil.
The price of the world’s most expensive nut may be attributed to the fact that not only mustaMacadamia tree be 7-10 years old in order to produce nuts, but also the incredibly hard shell of the nut must be broken prior to sale. The shell is so hard that it can actually break nutcrackers sold for home use.
So how much is this costly nut? Macadamia nuts can easily fetch around $30-$40 per kilo (2.2 lbs).
သဂျီးပြတဲ့ အသီးကတော့ တရုတ်ပြည်မှာ တော်တော်ပေါတယ် .. ယိုးဒယားဘက်မှာလဲရှိတယ် ..
ကြည့်ရတာ ရာသီဥတုအေးတဲ့ဒေသမှာမှ စိုက်လို့ရမယ်ထင်ပါတယ်။
အခွံမာကိုခွဲဖို့ သော့လိုဟာလေးပါ ထည့်ပေးလေ့ရှိတယ် .. အဆီများတဲ့အတွက် ကြာကြာထားစားလို့မရဘူး .. ဆီဂျီးစော်နံလာရော ..
အဲ့အဆံလေးလည် တော်တော်စားလို့ကောင်းတယ်နော် … ကြိုက်ပေမယ့် ဈေးကြီးလို့ ခနခန မစားနိုင်ဘူး
ငယ်ငယ်တုန်းက ခြံထဲမှာတင် သီဟိုပင်တွေရှိခဲ့ဖူးတယ်။ အသီးကြွေရင် လိုက်ကောက်ပြီး မီးသွေးမီးဖိုထဲ ပစ်ထည့်ပြီး စားကြတာ … ဒါပေမယ့် အရမ်းညှော်လွန်းလို့ လူကြီးတွေက ပေးမလုပ်ဘူး။ အိတ်ကြီးတစ်လုံးနဲ့စုထားပြီး အစေ့တွေများလာတော့မှ မြို့ပြင် ရွာပြင်ဘက်သွားပြီး ဖုတ်ကြတယ်။
ပြောရင်းနဲ့ အနံ့တောင်ရလာပြီ …
ငယ်က အိမ်မှာ သီဟို သရက်လဲ စား သီဟိုရွက်လဲ တို့ရတယ်… ကောင်းမှကောင်း သီဟိုစေ့ကတော့ ခိုးခူးမှ စားရတယ် နို့မို့လူကြီးတွေက ရောင်းပစ်လို့
တ ဝက် ကို မြေ ထဲ မြုပ်
တ ဝက် ကို ရေ ထဲ စိမ် ဆို တာ
က ဘယ် လို လုပ် တာ လဲ ဟင်
သီ ဟိုဋ္ဌ် ရွက် နု က တော့
ဖတ် ရင်း နဲ့ အ နံ့ လေး ပါ မွှေး လာ သ လို
စား ချင် လာ ပြီ
အသီးအမှည့်ကို စားရတာလည်း ကြိုက်တယ်
အရွက်နုကို တို့စရာအဖြစ် ငါးပိရည်လေးနဲ့ စားရတာလည်းကြိုက်တယ်
အရွက်နုလေးကလည်း ပူရှိန်းရှိန်းနံ့လေးနဲ့ စားကောင်းတယ်နော် …ပုံတွေရှာရင်းနဲ့ သီဟိုသီးအရမ်းစားချင်စိတ်ပေါက်လာတယ် … ဘားအံမှာရှိရင် ဝယ်ဂဲ့ပါ
ဟိုတလော သီလရှင်ကျောင်း အလှူနေ့က အောင်ဆန်းမှာ ကိုပေါက်တို့
အာတီဒုံ တို့နဲ့အတူ ဘုန်းကြီးသွားပင့်တော့ သီဟို သီးတွေမှည့်နေတာ
ခုခေတ်မှာတော့ သီဟိုစေ့ကို တရုတ်က ဆက်တိုက်ဝယ်လို့ ဈေးကောင်းတယ်နော်။
သီဟိုစေ့ကို အခွံချွတ်တာ အတော်လေးလည်း လက်ဝင်တယ်ပြောတယ်။
ဒါ့ထက် မှော်ဘီဘက်က မြေဈေးတွေလည်း တက် တက် တက်……
သီဟိုရွက်တို့စရာကို မိန်းခလေးတွေ စားမယ်ဆိုရင် သတိထားပြီးစာစေချင်တယ်၊ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကာ သူက အမျိုးသမီး ရာသီစက်ဝန်းကို ချုပ်စေတတ်လို့ပါ။အသီးအမှည့်ကို စားရင်လဲ အစေး(စီး)ပူမလောင်အောင်ဂရုစိုက်ပါ။အထူးသဖြင့် ခလေးတွေ အစေ့ကို မီးဖုတ်စားမယ်ဆို မီးလောင်အားကောင်းပီး မီးရှူး၊မီးပန်လိုမျို မီးတောက်တွေ ပန်းထွက်တတ်လို့ မီဘေးအန္တရာယ်ရှိပါတယ်။
ဒို့ လူဂျီး​တွေများ တုန်​းထှာကွာ ။ ကြက်​ဆူ စိုက်​ခိုင်​းမဲ့အစား သီဟိုစိုက်​ခိုင်​းပါလားလို့ ။ ကျုပ်​တို့အညာမှာ​တော့ အ​စေ့စားလို့ရတာ မကျီး​စေ့နဲ့ ဗန်​ဒါ ​စေ့ပဲ ရှိဗျာ ။ ဗန်​ဒါသီးက​တော့ စားမရ ။ အ​စေ့ကို တူ လို ခဲလိုနဲ့ ငယ်​ငယ်​က အထု​ကောင်​းလို့ ကိုယ်​့လက်​ကိုယ်​ ပြန်​ထုမိပါ​ရောလား ။ မကျီးသီးက​တော့ စားရသဗျ ။ အ​စေ့ကျ​တော့ ဇယ်​​တောက်​ကစား သဗျ ။ ​နွေရာသီ ပျင်​းပျင်​း ရှိ ဘယ်​နား မီးဖို ရှိသလဲ လိုက်​ရှာပြီး မီးဖုတ်​စား ။ မီးဖို ရှာမ​တွေ့လဲ ကိစ္စ​တော့ မရှိပါဘူး ။ အစိမ်​းစားရတာပါ့ ။ အစ​တော့ ဖန်​တွတွနဲ့ ။ ​နောက်​ ဆိမ်​့လာတာပဲ။